Fiovàn’ny mpitantana ny Lingua Arabo! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2020 3:26 GMT
Arahaba daholo. Nisintaka tsy ho tomponandraikitry ny asa fandikàna ho amin'ny teny Arabo ato amin'ny Global Voices i Ali Khalil, satria tsy ahafahany mitantana ny tranonkala intsony ny fotoanany manokana.
Ali tao Bali, Indonezia
Ny May 2016 no nanjohy ny GV i Ali nanao ny asan'ny mpandika, avy eo izy nanjohy ny tarik'ireo Mpitantana ny Fandikana ato amintsika! Isaorana betsaka ianao tamin'ny fandraisanao anjara nandritra izay taona maro izay!
Hafaliana ho ahy ny mampita amintsika ny fidiran'ny Mpitantana vaovao ny Fandikàna ho amin'ny teny Arabo. Ndeha hiarahaba an'i Mariam Abuadas!
Tale-na tetikasa ary ampy traikefa tokoa raha i Mariam eo amin'ny sehatry ny fitantanana vondrompiarahamonina, ny miralenta, ireo tetikasa tantanim-behivavy manerana ny faritra Afovoany-Atsinanana, eny an-kianja sy ao anatin'ny habaka nomerika. Mpiaraka nanorina ny ONG Tatawor izay miorina ao Jordàna, izay mifantoka amin'ny fisoloana vava, miralenta, zon'ny vehivavy ary ny fampiroboroboana ara-toekarena, miasa ao an-toerana mba hanomezana an'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana ny fitaovana hamoronana fiovàna iray ao anatin'ny lasitra fitantanana sy ny rafitra fandraisana andraikitra.
Mariam dia mpiaraka nanorina ihany koa ny Akhbarek.com – sehatra iray manolotra amin'ny teny arabo ireo votoaty voasaina tsara sy feno fampahalalàna ho an'ireo vehivavy tanora ao Afovoany-Atsinanana sy ny faritra Afrika Avaratra. Fanampin'ny teny Arabo, malama vava ihany koa i Mariam amin'ny teny Anglisy arahan'ny fahalalana betsaka momba ireo fahasamihafàna kolontsaina ao Afovoany-Atsinanana sy ao amin'ny faritra, ary afaka mifandray amin'ny teny Frantsay sy Espaniôla. Araho ao amin'i Facebook sy Twitter i Mariam.
Rami AlHames, sy Mariam Abuadas manomboka eto no miaraka mitantana ny Lingua Arabo.
Aza adinoina ny manaraka ny Ligua Arabo ao amin'ny Facebook sy Twitter, sady amporisihanay ianareo hizara ilay fisoratana anarana amin'izay rehetra fantatrareo mety ho liana hanjohy ny tarik'ireo mpandika lahatsoratra!
24 ora izayvondrom-piarahamonina